नेपालको सेयर बजार जानी राख्नु पर्ने अति उपयोगी सामान्य ज्ञान
ramkrishna February 17, 2021	nepal share marketनेपाल सेयर बजारनेपालको सेयर बजार जानी राख्नु पर्ने अति उपयोगी सामान्य ज्ञाननेपाली सेयर बजारसेयर मार्केट नेपाल
कम्पनी स्वामित्वलाई धेरै इकाइमा विभाजन गरि लगानीकर्ताबाट पैसा उठाउने व्यवस्थित र आधिकारीक प्रक्रिया नै सेयर (stock) हो । सेयरलाई नेपालीमा धितोपत्र (dhitopatra) पनि भनिन्छ । कुनै पनि कम्पनीको सेयर लिनु भनेको त्यो कम्पनीको स्वामित्व र जोखिम दुबै लिनु हो । यसो गर्दा कम्पनीको केहि हिस्साको मालिक आफू पनि बन्न सकिन्छ र कम्पनीको मुनाफाको आधारमा लाभांश प्राप्त सकिन्छ यदी कम्पनी नाफामा गएको खण्डमा ।
सेयर किनबेच हुने बजारलाई सेयर बजार भनिन्छ । तपाईले किन्नु भएको सेयर तपाईलाई बिक्री गर्न मन लाग्यो भने सेयर बजारमा सजिलै बेच्न सकिन्छ। कम्पनीहरुले कमाउन थालेभने सेयर मूल्य पनि माथि जान्छ र तेस्तै गरी अर्थतन्त्रमा, कम्पनीहरुमा समस्या देखिए भने सेयर मूल्य खस्किन्छ । सेयर बजारको सम्बन्ध देशको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको हुन्छ र सेयर बजारलाई अर्थतन्त्र नाप्ने ब्यारोमिटर पनि भनिन्छ ।
पृष्ठभूमी – सेयर बजार नेपाल
नेपालमा वि.सं १९९३ मा विराटनगर जुट मिल्स र नेपाल बैंक लिमिटेडले सेयर जारी गरेबाट सेयर निष्काउन गरी सर्वसाधारणबाट पुँजी संकलन गर्ने काम सुरु भएको हो र कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तरगत २०३३ असार २२ गते सेक्युरिटी खरिद विक्री केन्द्रको स्थापना भयो । यो केन्द्र धितोपत्र कारोबार ऐन (पहिलो शंसोधन ) २०४९ अनुसार २०५० साल जेठ १३ गते नेपाल स्टक एक्सचेन्ज – नेप्से (Nepal stock exchange – NEPSE) लिमिटेडमा परिणत भयो । यसपछि मात्र सेयर बजारको संगठनात्मक विकास र औपचारिक रुपमा दोस्रो बजारको कारोबार शुरु भयो । नेपालमा स्टक एक्सचेन्जमा परिणत हुनुभन्दा अघी धितोपत्र बजार सम्बन्धी सम्पुर्ण काम सेक्युरिटी खरिद विक्री केन्द्र आफैंले गर्दै आएको थियो ।
सेयरमा लगानी गर्ने दुई तरिका छन् :
प्राथमिक बजार भनेको के हो ?
पहिलो पटक निष्कासन गरिएका सेयरहरुको बिक्री हुने बजारलाई प्राथमिक बजार भनिन्छ। यहाँ आईपीओ (initial public offering – IPO) जारी गरिन्छ। प्राथमिक बजारलाई प्राइमरी मार्केट (primary market) पनि भनिन्छ। यस बजारमा दोस्रो बजारको तुलनामा जोखिम कम हुन्छ।
दोस्रो बजार भनेको के हो ?
दोस्रो बजारलाई सेकेण्डरी मार्केट (secondary market) पनि भनिन्छ र प्राय जसो सेयर कारोबार बदी हुने भनेको दोस्रो बजारमा नै हो। प्राथमिक बजारमा निष्कासन गरिएको सेयर (आईपीओ) किनबेच गर्ने बजारलाई नै दोस्रो बजार भनिन्छ ।
Previous Previous post: असल र सोझा केटाहरुले मात्र किन प्रेममा धोका पाँउछन ? थाहापाउनुहोस्
Next Next post: कुन दिशामा सिरानी लगाएर सुत्दा के हुन्छ ? एकदम ख्याल राख्नुहोस